News Collection: मैले पछि श्रीमान्लाई पहिलेको यौनसम्बन्धका बारेमा थाहा नदिन के गर्नुपर्ला ?
मैले पछि श्रीमान्लाई पहिलेको यौनसम्बन्धका बारेमा थाहा नदिन के गर्नुपर्ला ?
म अहिले २३ वर्षकी भएँ। मेरो विवाह मेरै प्रेमीसँग दुई वर्षपछि हुँदैछ। मेरो पहिलेको केटा साथीसँग शारीरिक सम्पर्क भएको थियो। मलाई डर लागिरहेको छ। यदि मेरो भावी श्रीमान् (हालको प्रेमी) ले मेरो पहिले सम्बन्ध भैसकेको थाहा पायो भने ? अनि मेरो योनि पनि खुकुलो छ, म कहिलेकाहीँ हस्तमैथुन पनि गर्छु। कहिलेकाहीँ योनि चिलाउने तथा गन्हाउने पनि हुन्छ। योनि टाइट बनाउने कुनै औषधी छ ? मैले पछि श्रीमान्लाई पहिलेको यौनसम्बन्धका बारेमा थाहा नदिन के गर्नुपर्ला ? म आफ्नो श्रीमान् (हालका प्रेमी) लाई गुमाउन चाहन्नँ। यदि पछि थाहा पाएर सम्बन्ध बिग्रियो भने म बाँच्न सक्दिनँ।
विवाहपूर्व यौन सम्पर्क ?
युवावस्थामा यौनेच्छा तीव्र हुन्छ नै, त्यसैले यौन सम्पर्क राख्न पुगिन्छ। सहमतिमै भएका यौनसम्पर्कमा पनि समस्या हुन्छन्, त्यसैले जोसमा होस नगुमाउन होस पुर्‍याउनुपर्छ। अनिच्छित गर्भ वा यौनरोगको समस्या भोग्नुपर्ने त छँदैछ। यी कुनै नभएको स्थितिमा पनि सम्बन्धको स्थायित्व नहुँदा वा त्यसले निरन्तरता नपाउँदा त्यसका आफ्नै समस्या हुन्छन्। यस्ता समस्या शारीरिक तथा मानसिक दुवै हुनसक्छन्। तपाईंको केटा साथीसँगको सबन्ध कत्तिको गहिरो वा प्रेमपूर्ण थियो त्यसको प्रभाव पनि पर्छ। क्षणिक आकर्षण र वास्तविक प्रेमको बीचमा फरक छुट्टयाउनु आवश्यक हुन्छ। क्षणिक आकर्षणलाई नै प्रेम मान्दा खाडलमा पर्ने सम्भावना हुन्छ।
पहिलेको प्रेम तथा यौनसम्बन्धका बारेमा चर्चा गरिएन भने तपाईं उक्त अवस्थाबाट गुज्रनुभएको होला भन्ने थाहा पाउन सजिलो छैन। पुरु षलाई महिला यौनअङ्गको बनावटका सम्बन्धमा सामान्य जानकारी हुने भए पनि तपाईंको योनिको बनावट वा स्वरूप यस्तै थियो भन्ने थाहा हुँदैन। यौनसम्पर्क राखेको कुरा थाहा पाउनु त झन् गाह्रो कुरा हो। हुनत आफूले विवाह गर्न लागेकी दुलही कुमारी हो कि होइन भन्ने चासो धेरै पुरुषलाई भए पनि पक्का हुन सजिलो छैन। कुमारित्व योनिच्छद भए वा नभएको कुरालाई नै मुख्य आधार बनाइएको पाइन्छ तर वैज्ञानिक तवरले हेर्ने हो भने त्यसलाई बलियो आधार मान्न सकिँदैन। किनभने कुनै-कुनै युवतीमा योनिच्छद जन्मजातै नहुन सक्छ वा यसको राम्रोसँग विकास नै नभएको हुनसक्छ। प्रथम यौनसम्पर्क हुनुभन्दा पहिले नै कतिपय युवतीमा शारीरिक क्रियाकलापका दौरानमा योनिच्छद च्यातिन सक्छ। कतिपय महिलाको योनिच्छद निकै लचिलो र तन्कन सक्ने हुन्छ। यस्तो स्थितिमा कतिपय महिलाको यौनसम्पर्क राखिसकेपछि पनि सो पातलो झिल्ली नच्यातिएको अवस्थामा हुनसक्छ। यस्तो स्थितिमा कौमार्य भङ्ग भएको भए पनि योनिच्छद नच्यातिएको शारीरिक प्रमाणलाई आधार मान्दा कुरा निकै फरक पर्छ। देहव्यापारको क्षेत्रमा एकपल्ट पनि यौनसम्पर्क नराखेकी युवतीसँग पहिलो यौनसम्पर्क राख्न बढी रकम तिर्न तयार हुने पुरुषहरू पनि हुन्छन्, त्यसैले उनीहरूलाई त्यसको अभिनय गर्न सिकाइन्छ भने अर्कातिर भिक्टोरियन अवधिमा बेलायतमा यो निच्छद च्यातिएको भान पार्न जुकाको प्रयोग गरिएका उदाहरणसम्म पनि भेटिएका छन्। यसको निचोड के हो भने अन्य कुनै तरिकाबाट सूचना नपाएको स्थितिमा सामान्यतः पुरुषले महिलाले पहिले नै यौनसम्पर्क राखेको निश्चित रूपमा थाह पाउन सक्दैनन्। त्यसैले यौनसम्पर्क राख्नुभएको कुरा थाहा पाउला भन्ने कारणले विवाहका सम्बन्धमा चिन्ता लिनु आवश्यक छैन।
योनि कसिलो कसरी बनाउने ?
योनि कसिलो बनाउन केगेल (Kegel) कसरत गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले pubococcygeus भनिने मांसपेशी समूहलाई पहिचान गर्नुपर्छ। यसका लागि पिसाब फेर्दा मांसपेशीको संकुचन गरेर पिसाब रोक्ने प्रयास गर्ने र यो प्रक्रिया दोहर्‍याउने, तेहर्‍याउने गरेर सो मांसपेशीको पहिचान गर्नुपर्छ। त्यही पिसाब रोक्न प्रयोग गरिने मांसपेशी नै त्यो मांसपेशी हो। यसले योनिद्वारलाई पनि घेरेको हुन्छ। अब यसको कसरत गर्न थाल्नुपर्छ। सुरुमा यस्तै १ सेकेन्डसम्म बेस्सरी खुम्च्याएर राख्ने र छाड्ने अर्थात् खुकुलो बनाउने गर्नुपर्छ। बिस्तारै यसलाई बढाएर ५ सेकेन्डसम्म पुर्‍याउनुपर्छ। बिस्तारै यो १० देखि १५ सम्म संकुचित गर्ने (खुम्च्याउने) र छोड्ने। यो क्रम बढाउँदै दिनभरिमा २० पल्टसम्म पुर्‍याउनुपर्छ। यसरी यस्तो ६ हप्तासम्म नियमित रूपमा कसरत गरे थाहा पाउने गरी केही फरक देखिन्छ। यो मांसपेशी संकुचित गरेर यौनसम्पर्कका बेला तपाईंको लिङ्गलाई बेस्सरी समात्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले तपाईंलाई मात्र होइन, तपाईंको श्रीमान्लाई पनि यौ नसुख प्राप्त गर्न मद्दत मिल्छ।
योनि गन्हाउने कुरा
योनि गन्हाउने, चिलाउने कुराले प्रजनन अङ्गको संक्रमण वा अन्य खराबीलाई संकेत गर्छ। स्त्रीरोग विशेषज्ञबाट राम्रोसँग परीक्षण गराई पूर्ण उपचार गराउनु नै समस्या कम गर्ने राम्रो उपाय हो। सरसफाइ महत्वपूर्ण छ तर अनावश्यक रूपमा गरिने अत्यधिक सरसफाइबाट पनि बच्नु आवश्यक हुन्छ। सफल यौन जीवनका लागि शारीरिक रूपमा कुनै बिमारी नहुनु वा सेतो पानीको उपचार हुनु अति नै आवश्यक छ, तर त्यति मात्रले वैवाहिक जीवनको सफलता सुनिश्चित गर्दैन।
समाधान के हुनसक्छ ?
मुख्य कुरा, भावी श्रीमान्ले थाहा पाउलान् कि भन्ने मनमा भएको भयबाट पहिले निस्कनुपर्‍यो। तपाईंका केटासाथीले तपाईंहरूबीचको यौ नसम्पर्कलाई चर्चामा ल्याउने खतरा कति छ भन्ने कुरातिर पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, तर उसले भयादोहन (blackmail) गर्न नसकोस् भनेर मन बलियो बनाउनुपर्छ। भयादोहन गर्ने स्थिति नभएको मान्नुहुन्छ भने त पीर गर्नैपरेन। प्रत्येक व्यक्तिले यौनसम्पर्क राख्ने वा नराख्ने भन्ने निर्णय गर्दा उसको व्यक्तिगत मूल्य-मान्यता, विश्वास तथा अनुभवहरूलाई आधार बनाएको हुन्छ। तपाईंलाई थाहै होला, कतिपय व्यक्ति पहिले रोजेको वा विवाह गरेको साथीबाट बालबच्चा भैसकेपछि पनि अलग भएर नयाँ सम्बन्ध स्थापित गरेर सुखमय जीवनयापन गरिरहेका छन्। तपाईंको मनमा भएको त्रासलाई बढ्न दिनुभयो भने पक्कै पनि त्यसले नकारात्मक असर पार्छ। त्यसैले आफ्ना विगतका यी नराम्रा पानाबाट पाठ सिकेर सुन्दर भविष्य बनाउन प्रयासरत भै अघि बढ्न सक्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईंको सामु सुन्दर भविष्य छ। मुख्य कुरा त आफू दृढ भै अठोट गर्नुहोस् कि अगाडिको सुन्दर भविष्यलाई आत्मसात् गर्छु र निरन्तर प्रयासरत रहनुहोस्। सफल वैवाहिक जीवनका लागि सुखदुःख दुवैमा साथै बस्ने प्रतिबद्धताको पालना आवश्यक हुन्छ भने एक-अर्का प्रतिको समर्पण पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विवाहपूर्व भएका यौ नसम्पर्कका बारेमा तपाईंका श्रीमान्ले थाहा पाएपछि सम्बन्धमा पर्ने असरलाई सामना गर्न पनि तयार रहनुपर्छ। सम्बन्धलाई सफल नै बनाउँछु भन्ने अठोट हुनुपर्छ।